Home Wararka Dowlada Federaalka ma lagu aamini karaa amniga doorashada?
Dowlada Federaalka ma lagu aamini karaa amniga doorashada?
Xukuumadda Federaalka ee xilgaarsiinta ayaa sheegay in dowladda Federaalka diyaarisay qorshaha lagu sugayo amniga doorashada dalka ka dhaceysa oo weli aan heshiis laga gaarin.
Wasiir amniga Xasan Xundubey oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in hay’addaha amniga iyo Talisyada Ciidamada u diyaar garoobeen sugida amniga doorashada, isla markaana xusay in uusan welwel badan ka jirin arrinta amniga.
Su’aasha u baahan isweydiinta ayaa ah Xukuumad wali hoostimaada Farmaajo ma lagu Amani karaa amniga doorashada.